•Ukuchithwa kwe-Drift Eliminator: I-PVC engonakalisiyo, uyilo olulodwa
PUmgaqo wokuSebenza: Uchungechunge lwe-BTC-S lusebenzisa itekhnoloji yokuhamba, edibanisa ukusebenza kwenkqubo yokupholisa amanzi, isisombululo samanzi se-glycol, ioyile, iikhemikhali, ulwelo lwe-pharma, ii-acid zokupholisa umatshini kunye nayiphi na enye inkqubo yencindi.
Inkqubo yolwelo ijikeleziswa ngaphakathi kwekhoyili ukusuka apho ubushushu buchitheka khona.
Spray Amanzi kunye nokuhamba komoya omtsha ngokuhambelana ngaphezulu kwekhoyili yokujiya, enceda ukunciphisa isikali sokwakha “iindawo ezishushu” enokufunyanwa kwezinye iinqaba zokupholisa eziqhelekileyo. Inkqubo yolwelo ilahlekelwa bubushushu bayo obunengqondo / bokugqibela njengoko ihamba isuka ezantsi iye phezulu ngaphakathi kwekhoyili efafazwe ngamanzi kunye nomoya owenziwe. Ukuncitshiswa kwento yokupholisa evaporative kunceda ukunciphisa ukuyilwa kwesikali kumphezulu wekhoyili. Inxalenye yobu bushushu bumphunga ikhutshelwa ecaleni kumoya ngumoya obangelwe ngumoya.
Amanzi anganyukanga awela phantsi kwicandelo lokugcwalisa, apho apholiswa ngumjelo wesibini womoya omtsha usebenzisa imithombo yeendaba yokuhambisa ubushushu ngomphunga (igcwalisa) kwaye ekugqibeleni uye kwisump ezantsi kwinqaba, apho iphinda iphindwe yimpompo phezulu. ngenkqubo yokuhambisa amanzi kwaye ubuye umva ngaphezulu kweekhoyili.
•ICold Chain •Icandelo leMichiza
•Inkqubo yokutya •Umkhenkce
Egqithileyo I-Closed Loop Cooling tower-Umnqamlezo
Okulandelayo: Uhlobo oluvulekileyo lwensimbi yokupholisa iNqaba-ukuPhuma koMnqamlezo
I-Chiller Evaporative Condenser
UkuSebenza kweKhomputha yokuSebenza ngomphunga